Oduu Gadda! Akkam jirta ngy? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Gadda! Akkam jirta ngy?
Akkam jirta ngy?miira gaddatiniin siif barreysee dubbin akkas godina harargee baha aanaa dadar araadda haqabaas ja’amtu keessatti namni Abdii Yuusuf ja’amu loltu wbo eriteria leenji’edha, gurba kana haala nama gaddiisisun waarani pp ergaa ajjeefte booda reefa isa makiinan lafarra harkiisani.
Mootummaan Kufee Jira, Ammaaf Mootummaa PPii kan Utubee Jiru Midi’aa Qofaadha.
~ Mootummaan Midiyaa EBC, ETV, FBC fi OBN qofaan Aangoo irra jira malee biyyi harkaa diigamtee jirti. Amma yerootti isheema kana irra taa’ee Sobaa fi Holola biyya lafaarra hin jirre afuufaa oola.
~ Oromiyaan harka PPii hin jiru. Oromiyaan Dhihaa fi Kibbaa harka WBO jiru. Kan hafan immoo yeroo dhiyootti arguuf jirra. Bakkoota WBO ballinaan irratti hin hojjetiin jiruutti Qeerroo, Qarreen Morma qabanii jiru. Afaan Qawween ummata Ukkaamsee jira.
~ Naannoo Tigiraayi harkaa ba’ee Riphee Lolaan Afuufaa jira. Walumaa gala Mootummaan Naannoo Tigiraay Ummataan filame hin jiru.
~ Naannoon Kibbaa Harkaa ba’aanii jiru. Har’uma kana #Koonsootti nama 100 oli ajjeese. Mormiin Walaayittaa Soddoo fi kan biroo akkuma PPii mormeetti jira.
~ Amaarri Zarraaf jettee diddee Bilxiginnaa Oromiyaatti Galagalanii jiru. Labsii Abiyyiin akka isaan Walqaayiitii fi Raayyaa lakkisaniif irratti baase TVn Amaaraa dabarsuu didee jira. Hoggantooti isaaniis gara Mormiitti galanii diddaa Abiyyiin Nun Bulchuu irratti barreessaa jiru.
~ Benishaanguul Gumuuz Waanuma Olaantummaa Amaaraan itti dhufeef Mootummaa PPii kun akka hin taane Mormii dhiyeessee jira.
~ Sumaaleen PPii fudhachuu akka didan irra deddeebiin dubbachaa turan.
Eenyuutu harka jiraree?
Kanaaf Waan hin jirre, Soba Adii, Shira hin jirre kijibaan karaa Midiyaalee FBC, ETVn, EBCn fi OBN afuufaa jira. Kun immoo kufuu isaaf ragaa ofirratti ba’ee jiraachuu isaa agarsiisaa jira.
Dulli hinafa moraa QBO ABO keysatii barota dheraf murna dantaa dhunfaf jaramanin qabsahota haqaa irrati demaa ture akkuma itti fufeti jira arras dulli kun Dhabichaf harawa yoo taus batee hoganota ABO bayye isaa midhee jira amas akkuma itti fufeti jira
Via: Dachaasaa Wiirtuu
Faffatuma faffati hamman nyaadhu anuu beeka!
Namoonni hedduun qabsoo hifataniifi naamusa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) Akeeka dhaabbateef ifatan(nuffaan) yeroo dhaa gara yerootti harca’aafi moggaatti of baasaa turaniiru. Akeekni maxxansa kanaa waahee Dr Diimaa Naggoo Ahaaduu irratti dhiyaatee Icciitii garaa isaa keessaafi Abiyyi Ahmad waliin marihataa bahan irratti fuulleffata. Dr Diimaa Naggoo HD ABO jalqabaa gaafa bu’ureeffamuu tahee filatamee hojjetaa ture. Adeemsa keessa Hoogganni bakka buufamaa gaafa deemu innis HD irraa buufamee namni biraan hanga gaafa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa bakka buufamanitti adeemsi Seeraa fi Heeraa ABO itti fufuun bara 2018 ABO Qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf Hoogganni ABO biyya seenee akkuma namuu quba qabu gaafatama dhalootatti dabarsuu fira mitii alagaanuu ni yaadata.
Namoonni hedduun qabsoo nuffanii, dadhabanii ykn mufatanii gaafa dhaaba keessaa fedhii mataa isaaniin bahan callisanii jireenya dhunfaa isaanii ooffachuurra komii dhageessifatuufii Ani waanan kana taheefi sana taheef jedhanii Olola ofuu qofa otoo hin taana dhaaba biyya alaa fi keessatti bixxiluun kan baratame dha. Kanaaf murni Leencoo Lataa Dr Diimaa Naggoo dabalatee qabsoo saba Oromoo xiqqeessuu fi salphisuun diina waliin hojjettu hojii Idilee godhatuun Wayyaanee gaafas aangoorra jiru sossobatuun filannoo bara 2005 irratti hirmaatuuf Leencoo Lataa murna badii Dr Diimaa Naggoo amma ergamaa PP tahe hojii tika irratti bobba’e maxa’atuun gara biyyaa seenanii ture. Garuu MM gaafasii Mallasaan Jara kana salphise akka of duuba deebise Yaadannoo hunda keenyaati.
Akka har’a Diimaan Ahaaduurratti jedhe otoo hin taane ABO tarsiimoo qabsoo lafa godhate keessaa qabsoon hidhannoos isa tokko ture. ABO Impaayera Itoophiyaa waliin wal adamsaafi wal waraanaa turuun Icciitii hin turre. Har’a maxxantoonni kanneen akka Diimaa Naggii gaafa biyya kana seenan booddee OPDO gargaaruu malee qabsoo nuti goonu hin jiru jechuun afuura of kutaa fiiganii akka galan Nami hundi ni yaadata.
Ahaaduu irratti kan Dr Diimaa Naggoo haasa’e nuuf Kallattii gaarii dha; isaan durumaanuu erga gaafa ABO keessaa Moggaatti of baasanii ergama diiggaa fudhatanii hojjetaa turuu akkasumas dhaabaicha diina keessa naquun keessan diiguu irratti hojjetaa turani. ABO Hoggansa waloon maskamee otoo jiruu addatti hundi isaanii Jaal Daawud irratti duuluun addatti rukuchiisuu barbaadu. Akka haasaa Namicha Diimaa Naggoo jedhamutti ABOn inni amma Hooggansa irra jiru Dantaa mataa isaafi Aangoof socho’a jedhe; garuu miti.
HD ABO Jaal Daawud Ibsaa sossobaa alagaa diduu qofaa otoo hin taane gootummaan dura dhaabbattanii Akeeka Bisummaa isaaf wareegama qaalii sabni Oromoo baasaa turee fi jiru galiin gahuuf Dandii haqaa irra cichoominaan imalaa jiru. Jibbinsi fi duulli gama gamaa gamanaa irratti gaggeessaa jiru waan Akeeka irraa maquu didaniif malee ajandaan biraa hin jiru. Addatti diinni HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Addatti rakkina uumuuf deemu jabeessinee ni Balaaleffanna.
HD ABO Jaal Daawud Ibsaa waliin taanee Akeeka keenya galiin ni geenya!